Tijaabada xawaaraha loo malaynayo ee Meizu 16 ayaa soo shaac baxday | Androidsis
Heerka dhibcaha ee Meizu 16 ayaa khadka tooska ah looga sii daayay ka hor inta uusan si rasmi ah u bilaaban taleefanka oo noqon doona bisha soo socota.. Sawirka sirta ah ayaa kashifay in taleefanka uu helay 291.866 dhibcood tijaabo AnTuTu ah, dhibco ka sareysa kuwa laga helay dhamaadka-sare ee kale oo horeyba suuqa uga jiray. Si kastaba ha noqotee, xaqiiq ahaantan ayaa xoogaa shaki ku jirta, waana sababta aysan uga soo bixin qaybta maqalka.
Qalabkan waxaa la filayaa inuu la yimaado qeexitaanno farsamo oo rajo leh.Sidaa darteed, natiijooyinka aan hoos ku tusi doono ma noqon doonaan kuwo aad uga fog xaqiiqda.
Dhibcaha bartilmaameedka Meizu 16, sida uu sheeganayo sawirka xaday, ayaa ka sarreeya dhibcaha taleefoonnada casriga ah ee shirkadaha kale ee Shiinaha laga soo saaro., tani waa 291.866. Isbarbardhigga, ah Xiaomi BlackShark helay 287.759 ee qiimeyntii bishii hore; ah Waxaan ku noolahay NEX helay 284.227; dhibcaha OnePlus 6 waxay ku taal 282.275; iyo dhibcaha Xiaomi Mi 8 waa 273.221.
Daboolka hoostiisa Meizu 16 iyo 16 Pro labadaba waxay lahaan doonaan Qualcomm's Snapdragon 845 octa-core processor, isla midkaas oo gaara inta ugu badan ee 2.8GHz. Kani waa SoC oo awood u leh inta badan calanka la soo saaray sannadkan.
Dhowr maalmood ka hor, agaasimaha guud ee shirkada ayaa shaaca ka qaaday inay jiri doonaan 8GB RAM + 128GB oo ah qaabka keydinta gudaha ee qaabkan, oo loo badinayo inuu noqon doono nooca ugu dambeeya ee Meizu 16. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in taleefanka casriga ah uu la socdo shaashad shaashad ah oo aan la soo bandhigi karin, lana filayo inuusan la imaan doonin naqshad heer sare ah sida ay hadda tahay. Intaas waxaa dheer, Waxay la imaan doontaa laba kamaradood oo gadaal gadaal ah iyo taageerida lacag la'aanta wireless. Dhinaca kale, waxaa jiri doona nooc kale oo la yiraahdo Meizu X8 taas oo la shaqeyn doonta processor-ka Snapdragon 710, laakiin taasi ma lahaan doonto dareeraha faraha ee shaashadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Tijaabin xawaare la sheegay oo ah Meizu 16 ayaa soo shaac baxday
Vivo Y71i, shaashadda shaashadda cusub ee 6-inch FullView